Ergada Shirka Gaalkacyo Ninba Dantiisa | WARARKA PUNTLAND
Home Maqaal Ergada Shirka Gaalkacyo Ninba Dantiisa
Ergada Shirka Gaalkacyo Ninba Dantiisa
Shirweynahii Afarta maalmood ahaa ee ka socda magaalada Gaalkacyo waxaa isugu tegay dadweyne reer Puntland ah oo loogu magac daray Ergada Shirweynaha Puntland.
Shirkan oo ujeedkiisu ahaa in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka jiritaanka Puntland iyo waxa ka khaldan iyo weliba in dib loo sixi doono khaladaadkii ka abuurmay mudadii ay jirtay Puntland ayaa in durbu muuqda mid laga weeciyey wadadii loo jeexay isla markaasna majarahabaabin lagu sameeyey.
Dhaqaalaha shirweynahan loogu tala galay in uu ku baxo ayaa gaaraya aduun dhan 3 Milyan oo Doolar oo ay bixinayaan dowladaha deeqaha bixiya, waxaana markii ugu horeeysayba 150 qof laga soo reebay tirada ergada horay loogu tala galay oo dhameyd 300 oo qod.
Talaabadaasi waxay shaaca ka qaadeysaa in hawlwadeenada shirweynhuhu ay ku dhaqaaqeen beekhaamin dhaqaalihii shirweynaha loogu tala galay, waxaa kaloo Guddigu ay rifeen oo 40 Doolar keliya ka soo reebeen lacagtii ergadu shirweynaha lagu casumay ay biilan lahaayeen, taasoo horay loogu qoondeeyey qofkiiba 100 Doolar maalin walba in ergaygu helo, $ 60% ayaa muuqata in meesha laga saaray biilkii ergada.
Waxaa kaloo hoos loo dhigay tirada maalmaha shirweynuhu socon lahaa oo dhameyd 15 maalmood oo lagu soo koobay 4 maalmood oo keliya, waxaana Guddigu shirka hogaaminaya ay meesha ka saareen kharashka 11 maalmood oo shirweynuhu socon lahaa.
Ergada ka qaybgashay shirkaas waa kuwo reer Puntland ah haseyeeshee waa shakhsiyaad iskood isaga tegay, kamana imaan go’aanka tegistoodu rabitaanka dadweynaha ay matalayaan, waxaana jira ahdaaf kala duwan oo ka qayb galayaasha shirkaasi ay u tageen madasha shirweynaha sida:-
Kuwo shirka u tegay in ay dhaqaale ka soo helaan.
Kuwo siyaasiyiin hore ahaa oo doonayey in ay dillaaciyaan boogaha qolofeystay ee siyaasada Puntland ay dhashay.
Kuwo Siyaasada Gaas difaacayey.
Kuwo maalin joog u aaday magaalada Gaalkacyo.
Kuwo dhaqaalaha shirka loogu talagalay boob ku haya
Waxaa la qoondeeyey shirweyne ka dhici doona magaalada Qardho oo maamulka Gaas ugu magac daray magaaladii Dhaqanka Soomaaliyeed, taasoo la doonayo in la isugu keeno Isimada Puntland talaabadaasina ay noqoto wejiga 2aad ee shirweynaha.
Isimada Puntland ayaa dhab ahaantii waxay ku kala qaybsan yihiin aragtida maamulka Gaas ee quweynaha nidaamka Boqortooyada Cismaan Maxamuud, waxaana durba soo baxaya in ay kulanka magaalada Qardho diideen isimada tunka weyn ee Puntland, sida Isimada gobolada Mudug iyo Nugaal iyo Isimo ka tirsan gobolada Bari, Sanaag iyo Sool.
Sarkaal ka tirsan Guddiga qabanqaabada shirweynaha ayaa laga maqlay in ay xiligan Isimadu bateen taasina ay fududeyneyso in dowladdu la macaamisho Isimada ugubka ah ee xanaftoodu yar tahay.
Kaalinta Dowladda Puntland.
Mudadii sanadka iyo Barka aheyd ee uu jirsaday maamulka C/weli Maxamed Cali Gaas waxaa soo baxayey dhaliilo uu maamulkaasi iska dhiqi waayey, waxaana ugu weynaa dhaliilaha (Been aan libiqsi laheyn oo Madaxweyne Gaas lagu ogaaday in uu wax ku hogaaminayo, wax qabad la’aan, go’aan jilicsan iyo xuquuqdii shaqaalaha iyo ciidamada oo dowladiisu bixin weyday)
Haddii uu qabsoomo shirweynahaani oo ay ka soo baxaan natiijooyin wax looga bedelayo awood qaybsiga maamulka, kheyraadka oo la wadaago, cadaalada oo loo sinaado, horumarka oo degmooyinka si siman loo gaarsiiyo iwm, laakiin hadii xaajadu noqoto sidii tii la xisaabtanka golaha Wasiirada, waxaa dhab ah in qorshuhuba ahaa in la meel marsado xoogaada shirweynaha loogu tala galay oo keliya.
This post has already been read 89324
Previous articleFAALO-Daawo Video: Guddiga dhaqaalaha G. Mudug oo Ganacsatada ugu baaqay inay Canshuurta berriga bixiyaan taasoo u GAADAYARE Cunayo
Next articleProf Jawaari “Marka laga reebo Puntland, Maamullada kale waa KMG.(Dhagayso)